Mushaar kororsi madaxdii FIFA loo haysto - BBC Somali
Mushaar kororsi madaxdii FIFA loo haysto
Qareenada FIFA, ayaa sheegy in saddexda nin oo illa dhawaan ahaa kuwa ugu sareeya guddiga kubbadda cagta ay kororsadeen mushaarkooda iyo gunnooyinka iyagoo ka dhigay guud ahaan sideed milyan.
Wuxuu ururka kubbadda cagta daboolka ka qaaday qandaraasyada madaxweynihii hore Blatter iyo ceyrintii maalin kaddib xoghayihii guud ee hore Valcke iyo madaxii lacagta Kattner, markii booliska Swiss galeen xarumahooda. Waxay qareenadoodu sheegeen in saddexduba ay sameeyeen howl isku xiran oo ay isku naaxinayeen intii u dhexeysa sanadihii 2011kii iyo 2015kii.
Qoraalo iyo xogta kombuyuutarada laysugu gudbiyo ayey ku qaateen intii uu socday howlgalkii khamiista, kuwaasi oo baarayaashu la xiriirinaayeen Blatter iyo Valcke.
Qoraal laga soo saaray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Switzerland oo baaristan sameeyay ayey ku qornaayeen in qoraalada iyo xogta la helay hadda la baari doono si loo go'aamiyo xiriirka ay la leeyihiin dacwadda socota.
FIFA, ayaa sheegtay in cadeymaha ay ku heleen baaristooda gudaha ay la wadaagi doonaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo waaxda cadaaladda Mareykanka.
FIFA, ayaa jahawareer ku jirtay ilaa May 2015kii, markaas oo baarayaal Mareykan ah ay soo bandhigeen musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray madaxda ugu sareysa ururka.